ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ပန်းပန်လျက်ပင်
အ ခုထိ ပေါ့ အမေဘယ်နေရာသွားသွား အပြုံးကိုစီနဲ့ ကြိုဆိုနေကြတဲ့ သူအများကြီးပါ ဟာဝိုင်အီခရီးစဉ်တင်မကဘဲ ကိုရီးယားခရီးစဉ်တုန်ကလဲအတူတူပါဘဲ သူတို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကအစ ဟန်ပန်အမူအရာမပါအပြုံးတွေနဲ့ ပါ သေခြာကြည့် ရင် ကြိုဆိုတဲ့ သူတွေကလုပ်ကြံပြုံးကြတာမဟုတ်ဘဲရင်ထဲကလာထဲအပြုံးတွေပါ။ဂန္တ၀င်အဲဒီပုံက ယောက်ကျားသားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီ အမေ လမ်းလျှောက်နေတာ ခါးကိုကော့ ရင်ကိုမော့ ပြီးလျှောက်နေတာ အရမ်းအားကြဘို့ ကောင်းတဲ့ သူပါ။ကိုရီးယားခရီးစဉ်ထဲကနောက်ဆုံးမ်ိန့် ခွန်းထဲမှာပညာသားပါလှပါတယ်။ လူကြီးမင်းများကျမတို့ နိုင်ငံတိုးတက်ဘို့အကူအညီပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်တဲ့ကဲဗျာ.မိန့် ခွန်းပြီးသွားတော့ အားလုံးမတ်တတ်ရပ်လက်ခုတ်တီးအားပေကြတာက၊ကိုရီးယားသမိုင်းသိပ်လှသွားတယ်။ကိုရီးယားပြည်သူတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ နိုင်ငံတကာကလေးစားချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်ပါ ။တော်ဝင်အမေ သက်တော်ရာကျော်ရှည်စေကြောင်း ကျနော်မျိုးမှဆုတွေတောင်းပေးနေပါ၏။
In this photo taken on 25 July 2011,
Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi signed onabook for one of her fan who want her signiture sign on that in Yangon, Myanmar.
I got three chances to take photograph to her on that day.
1st - in her office including this one,
2nd - her 1st meeting with Union Minister Aung Ky
3nd and final- at her compound.
မူရင်း Lynn Bobo